Yiba nomthandi onjengawe - Geofumed
Yiba nomthandi onjengawe
NgoJulayi, 2011 Ukuzonwabisa / ukuphefumlelwa
Andizange ndilindelwe ngelinye ilanga ukuba ndishicilele ezi zinto zangaphakathi phambi kobukeli be-30,000 kwi-site kunye ne-14,000 apho kufana nokutya kwabo bahamba khona ngenyanga kule ndawo. Kodwa ukuguquka kobomi kunye nomnyaka wokugqibela kususile uchungechunge lwentlupheko evela kumphephelo wento endingayibiza ngokuba yinto eqhelekileyo, ngoko kungabikho nkcazo ezongezelelweyo ezivakalayo ezingenasidingo, apha uya:
Ukuba bekufuneka ndiqalise into ethile, ndiyakwenza ngenxa yokuphendula ngokukhawuleza kwimiqondiso yam. Ndiyakuthanda ukwazi ukuba usabele njani alolo wavuka iminwe yam, lo gama ngesandla esinye Ndizinqandile egosogoso zakho kunye nezinye efuna bamaqhosha ngaphambili, ngamanye amaxesha kunye amathupha, ngamanye amaxesha ngezikhonkwane, ukuba ukuhlela ukuba iimpendulo zakho ukuba imhlabe emehlweni am zahluzwa ngo piteously yokusungula ingqondo egqibela emazantsi ngxenye.
Kodwa akusiyo yonke into endiyixabayo ngayo inkampani yakho. Ihamba ngaphaya koko kwaye ishwankathelwe ngendlela endibona ngayo umhlaba emehlweni akho. Oku kwi iisampulu secretion kunye nam apho ndize lula thina ngayo sifumane indlela ukumnyanzela ngokuzithandela ukuba uvala kunye waphazamiseka kuya kuthetha ngokungabi ngaphezulu. Kukho magic konke oku, xa ndicinga yonke loo minyaka abagulayo-lombutho bezama ukuba nokusebenziseka, lo ukuqhabalaka ngayo mna ke ubufumene ubomi indlela lula chispazo yakho; kuwe ukuhamba tickling nam esiswini kunye ezithi zibonise kunye wam esizalweni, imiso yonke, emva kwemini, bonke ubusuku, kwelaa gumbi, kule moto, ekhitshini, kwiveranda ... nkqu yokutyela .
Ngesinye isihlandlo mna kunzima ukuqonda iingongoma zakho ezibuthathaka, kuquka babecinga ngebengabanga ngokwaneleyo. Noko ke, emva kokuba rose sifihla amagophe of geometry lakho, ndaye ndiqinisekile ukuba phantse yonke into kwinqanaba ezingundoqo phambi kwakho, kanye ezantsi. Enoba umva okanye kwindawo eqhelekileyo, kanye khona apho ingqiqo ngokupheleleyo kule umlingo kunye nezinto ezincinane ndiye ndafunda ngokokwazi kwam uphando, nzulu kunye impendulo yakho utshintsho kuphela indawo.
Xa ndiqukumbela, mna oyithandayo kukuba aura wenkqu ukuze bandiqumbise xa ndibona wena, xa uthe Roso, xa kukugubungela, xa uncapped, xa I ukuxhuma. Ngomnxeba olula ulapho, uphinde uxhumeke kwaye unxibelelene nokuba ndandikubonanga yonke imini. Kwaye ukucinga ukuba ngenye imini khangela phantsi lula yakho, ngoku uphefumlela romance Ndiyathemba andiyi dim amancedo phambi kokuba undixelele malunga udade wenu kunye namacebiso ezifihlakeleyo undinike maxa wambi eliyincopho; Andiyazi ukuba ngenxa yenkxalabo okanye ukuxabisa ngokwenene kwintsapho yakho.
Kuyavuya ukuba ube nePad. Naluphina ukungaqondani kuya kuba negalelo lokufunda okulula okanye ukudibana.
Post edlulileyo«Edlulileyo INSPIRE intuthuko eYurophu
Post Next Izifundo zevidiyo ze-AutoCAD, zikhululekile kwiintsuku ze-7Okulandelayo "
Enye impendulo "Ukuba nomthandi onjengawe"
Ngomzuzwana ndacinga ukuba ibhulogi yalahlekelwa intsingiselo yayo, indikhuphe ebusweni obushushu bendiza ehotele kwimbongo endala ngumbhali ongaziwayo ukuba ndiyishiya apha ukuba abathandi bezomculo bakhumbule kwi-iPad.
Uhamba ebusuku ...
yonke into ... yonke into ... kuyo yonke into ...
lugxinwe nguwe ...
Wena usezandleni zam ...
emlonyeni wam ...
emehlweni am ...
ngolwimi lwam ...
lakho ivumba ...
Imiphumo yendlela entsha yothando ...
apho bazivumela ukuba bathathwe ngokuziva ...
ngaphandle kwemingcele ...
ngaphandle kokubandlulula ...
ngaphandle kokuthozama ...
Amabhunga amabini ekuhanjisweni ...
ba fumana ...
ukumanga ubusika ukufunda ...
kodwa umnqweno, uthando kunye nemihlali kukunika ingcali ...
Ndifuna umnqweno omkhulu kangaka ...
ukuba kwintlanganiso eyenza i-voragine iqhuma ngokubamba okulula ...
Ukubanga kwakho ...
Ngaba zikhona ezinye ezingcono?
Injabulo izalwa kuphela kwibala labo ...
eshiya ingqondo yam,
ndambethe iingubo zakhe
kwaye ndivumele ukuba ndihudulele emzimbeni wakho ...
Ukunyuka kwamabala okuvusa
ukujonga kwakho ... i-caresses yakho ... ukuwanga kwakho ...
Kwaye indalo yaqhuma
kwaye nguwe kuphela mna kunye noxanduva lwethu ...
Andizange ndishiye ... awuzange ushiye ... unamathele uhlala nam.